सरोकारवाला शक्तिकेन्द्रहरुमा ‘कुत’ बुझाउन सक्ने र त्यसका लागि ‘ भ्रष्टाचारको बाली’ उमार्न सक्ने, यही हो योग्यता– घपलाविद् गोपाल खड्काको । ‘प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार’ गर्न सक्ने योग्यता हो उनको । तर, कहाँ के मिलेन, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट पदच्यूत गरिए । त्यसअघि नै नेपालले ११ भदौको अंकमा ‘काण्डकारी निर्देशक’ शीर्षकको आवरण कथामा उनका कर्तुतबारे विस्तारमा लेखेको थियो ।
जहाँ सहरीकरणको कृत्रिम उभारमा देखासिकी शैलीको उपभोक्तावादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ, त्यहाँ लोकमान सिंह कार्कीदेखि गोपाल खड्काजस्ता पात्र देखापर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यस्तो प्रवृत्ति जहाँ बलशाली हुन्छ, त्यहाँ यस्तै पात्रहरु जन्मिने हुन् । हामी मात्र अपवाद होइनाँै । नेपाली समाजको मनोदशा के भने यस्ता पात्रले पदमा रहुन्जेल कथित सामाजिक प्रतिष्ठा पाइरहन्छन् । समाजको एउटा तप्का भ्रष्टाचार गर्नसक्ने यस्ता ‘ बहादुरहरु’को जयगान गर्दा आफ्नो पनि सम्पत्ति र प्रतिष्ठा केही बढ्छ कि भन्ने आशमा र्‍याल चुहाइरहेकै हुन्छन् ।
किनभने, जसरी पनि सम्पत्ति कमाउनैपर्ने र कमाउन सक्नेलाई पुज्ने हाम्रो प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचारको मूल कारक हो । रामेश्वर खनालले ८ असोजको नेपालमा लेखेजस्तै रातारात धनकुवेर बन्ने अस्वाभाविक सपना अहिले स्वाभाविक भएको छ । जबकि, यो हाम्रो सामाजिक मान्यता नै थिएन । विगत चार दशकमा बिस्तारैबिस्तारै सामाजिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरु वाहियात हुँदैछन् । जसको कारणले विषमता निम्तियो, जसले थिति भताभुंग र लथालिंग बनाए, उनीहरु अझै पनि समाजमा झन्डैझन्डै पूजनीयजस्तै छन् । जस्तो: पूर्वसरकार प्रमुख एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई नै हेरौँ ।
मेरा नातेदारसमेत हुन् रेग्मी । विवाह, व्रतबन्धदेखि विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा उनलाई निम्त्याइँदा समारोहकै शोभा बढ्ने ठान्छन् मेरा नातेदार पनि । जबकि, प्रधानन्यायाधीश पदलाई ‘लियन’मा राखेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भए, रेग्मी । उनी प्रधानन्यायाधीश हँुदा स्वयं न्याय क्षेत्र पनि चकित भएकै थियो । यो कसरी सम्भव भयो ? न्यायालयलाई गर्तमा पुर्‍याउने खेलको सुरुआत उनीबाटै भएको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श भत्काउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ठेंगा देखाउने काम उनैले गरे । समाज यस्ता प्रवृत्तिलाई आफूनजिक पाउँदा सामाजिक मर्यादा बढेको ठान्छ भने हामी कहाँ रहेछौँ ?
पश्चिमाहरुले कुनै बेला आफूलाई ‘क्याथोलिसिज्म’बाट ‘ प्रोटेस्टेन्ट’मा रुपान्तरित गरेर तडकभडक र पाखण्डबाट मुक्त गराए । जलस्रोतका जानकार दीपक ज्ञवालीले भनेजस्तै अबको हाम्रो आन्दोलन पनि त्यसमै केन्द्रित गरे के होला ? किनभने, ‘ भ्रष्टाचार जारी छ’को आन्दोलनलाई मटियामेट गर्न पनि सामाजिक जागरणमार्फत एक दह्रो प्रहार जरुरी छ ।